Ny tsara indrindra fametahana fiara manenika - TopFillers
Labeling Flat Flat
Home / Famaritana machinery / Labeling Flat Flat
Fanamarinana ny fametahana fanoratana automatique
Labeling Flat Flat, Famaritana machinery
Main Feature 1.Suitable ho an'ny orinasa oral, solika, laka mafy, batteries, ary kely ary tsy afaka mitsangana diamondra boribory mamaritra ny manodidina ny faribolana sy ny boribory antsasaka manondro ny 2.Advanced rafitra man-machine rafitra rafitra, mora ny asa, feno miasa, manana ny fanampiana amin'ny aterineto mpanankarena 3.Special fanodinana rindran-d transport conveyor, ny pesta automatique positioning 4.Automatic detection photoelectric, tsy manana mari-pamantarana tsy misy teboka ary tsy misy mari-pamantarana automatique na alarm automatique detection, mba hisorohana ny fivoahana sy ny fako 5. Ny rafitra masinina dia tsotra, mangarahara, mora ampiasaina sy ny fikojakojana 6. Manamboatra ny fiara mpamokatra marika malaza, ny famantarana ny sakafo ...
Fanaovana sora-baventy karazan-tsakafo
Product Description Ny votoatin'ny fampiharana Ny modely NPACK dia ny vokatra fanavaozana farany nataonay manokana, natao manokana ho an'ny saosisy, izay mamaritra manodidina ny saosisy miaraka amin'ny sticker adhesive. Ny endri-pandehan'ny milina dia miankina amin'ny habeny. Karazan'ny fitaovana ²Adopt ny rafitra fanaraha-maso matihanina PLC, ny fikolokoloana ary ny haingam-pandeha; ²Singanina fanaraha-maso rafitra fanaraha-maso, tsotra sy mahomby; ²Advanced teknôlôjia momba ny rafi-podin'ny pneumatika, manonta mazava tsara ny laharana antonony sy daty fandroana; ² fanodinana fitaovana fanodinana fitaovana, ahazoana antoka fa mihamafy kokoa ny mari-pamantarana; Ny sandan'ny tavoahangy efa simba dia latsaky ny 1 / 200000; Ny fitaovana elektrônika Ø Ny singa elektrônika manan-danja, ny fahombiazan'ny toetr'andro, ny tahan'ny tsy fahombiazana; Ô ...
Vita amin'ny fantsom-bokatra misy tavoahangy fanenon-damosina
Main fampisehoana dia manasongadina 1.Applicable mba apetaho adhesive marika famantarana ny ambony-fiaramanidina ny vokatra izay avy amin'ny sakafo, ny fampiasana isan'andro simika, fanafody, avoaky, ary ny hafa 2.Wide fampiharana orinasa isan-karazany izay mety ho ampiasaina mba apetaho adhesive marika famantarana ny fiaramanidina ny zavatra miaraka amin'ny sakan'ny 30mm ~ 200mm na milaza azy, ary koa ireo izay manana faritra uneven ny marika-maika raha ovana 3.Strong rafitra sy mateza ny fampiasana telo-fanoitra fanitsiana feno rafitra izay mahatonga fampiasana ny fahamarinan-toerana ny telozoro, Easy sy timesaving mba hanolo zavatra isan-karazany sy ny fanaraha-maso 4.Intelligent mandeha ho azy amin'ny asa fanaraha-maso photoelectric ny fametahaka marika ny fanafoanana ny asa ...
Karohy ny tavoahangy kely vita amin'ny tavoahangy
Ny fampiasana ho an'ny fikirakirana fikirakiram-bozaka mafy, ny fametahana tsipika, ny fampiasana ny horita horita, ny fomba amam-panazongozonana horonana mba hampitomboana ny fahamarinan-toerana, hanatsarana ny fahombiazan'ny fametahana. Ny mpanonta an-drakitra na lohatenin-drakitra fanontam-pirinty eo amin'ny mari-pamantarana, dia azo tanterahina amin'ny endriky ny famokarana fanontam-pirinty, fandefasana sy fanontana barcodes ary fampahalalana hafa. Ny mpanonta printy an-tserasera amin'ny fandefasana entana, dia azo tanterahina mialoha na aorian'ny fametahana ny fametahana etikety momba ny famokarana vokatra fanontam-pirinty, antontan-taratasy, code barcode ary fampahalalana hafa. Ny 1, haingam-pandeha haingam-pandeha, manana rafitra mpanodina amin'ny tadin-dabozia, mandroso haingana ny tavoahangy, ny tavoahangy dia mampitombo ny fahamendrehana sy ny fitaterana fitaterana. Labeling speed up to ...
Azo ampiasaina amin'ny mari-pamantarana mangarahara, avo lenta, tsy misy tavoahangy. Azo ampiasaina ho an'ireo marika mangarahara (transparency). Ny serivisy napetaka amin'ny serivisy fanodinana dia manamboatra haingana sy maharitra. Atsofohy ny fomba nentim-paharazana nentim-paharazana, alao ny fomba fiasa tsy manam-paharoa mba hisorohana ny fantsona na fanesoana. Ny tombontsoantsika tsara, ny fampisehoana avo lenta Hifidy alemà Leuze GS photocopie sensor, United States AB servo motera, JSCC motera sy ny fiara mandeha mifanila aminy, izay nanao fikarohana tsara ho an'ny fametahana haingana sy haingam-pandeha. Ny fotodrafitrasa ara-teknika fototra sy ny fametrahana ny anarana Famonoana ny vakoka raokom-pamokarana ny famokarana herinaratra 12000-20000 pcs / h, ...
Horonan-taratasy fanoratana milina fanoratana milina fanoratana
Ny fampiharana amin'ny vokatra horizontale Autodetecta automatique fanenanam-pitenenana dia manamboatra PLC matanja-tsaina sy ny rafitra fanaraha-maso ny horita Horizontal Automatika fanoratana ny fametahana labialisotra ny fametrahana ny kapila, alaivo ny labozia, tazony ny labozia eo amin'ny tavoahangy Horizontal automatique fanoratana milina fanoratana horonan-tsary dia ampiasaina amin'ny faritra maro isan-karazany, toy ny boribory tavoahangy / Square tavoahangy / fitaratra tavoahangy / siny / Bag Modely NP-HL marindrano Automatic tsindrona tavoara feno fametahaka marika milina fahaiza MAX 200bottles / min tavoahangy haavon'ny 30-350mm (ampanjifaina) tavoahangy savaivony 20-120mm (ampanjifaina) Label Haavo 20mm-210mm Label halavan'ny 25-300mm araka ny marina ± 1mm Label Roll ao anatin'ny savaivony 76mm Label horonan-taratasy ivelan'ny savaivony 380mm lafiny 2300 (L) × 1150 (W) × 1400 (H) MG Weight 300Kg Quick Details Type: fametahaka marika Machine toe: New Fampiharana: fitafiana zava-pisotro , Chemical, ...
Fitaovana fanenomana haingana haingana haingana
Product Description Fampiharana: Ny JT-215H dia natao ho an'ireo boaty solaitra tsy misy mari-pototra na vokatra izay tsy mibaribary mibaribary (rindran-damina ambany na ambony) Features 1.PLC mifandraika amin'ny parché LCD, ary ny fandaminana sy ny fampiharana dia mazava sy mora . 2. Ny fitaovana dia mifanaraka amin'ny fepetra GMP ary vita amin'ny STK tsy manara-penitra SUS304 sy legioma avo lenta. 3.Manao fiasa maro toy ny fitarihana, fisarahana, fametahana, fametahana, manisa. 4. Afaka manitsy ny toerana misy ny mari-pamantarana ny haavony. 5. Azo ampiasaina amin'ny rindran-damina amin'ny famolahana ny fiara ny milina. 6. Ny milina manokana dia azo alaina araka ny fangatahan'ny mpanjifa. Main Technical Parameters Modèle No JT-215H Label height ...
Fitaovana automatique fanenana labiera hosodoko fanoratana
Product Description 1. Ny votoatin'ny fampiharana: Azo ampiasaina amin'ny zavatra boribory misy loko kely izay tsy afaka mitsangana rehefa mametaka, toy ny ampoule, vials, ravina fanangonana rà, pen, sausage sy ny sisa. (PS ny milina fametahana etikety dia azo arahina araka ny zavatra ilainao) 2. Toetran'ny fitaovana: Manompa matihanina amin'ny teknolojia matihanina PLC, ny fikolokoloana sy ny haingam-pandeha; Amin'ny fampiasana rafitra opera fanaraha-maso mofomamy, tsotra sy mahomby amin'ny fandidiana; Ny teknolojia fampitomboana ny rafi-pandaminana pneumatic, manonta mazava tsara ny laharana nindramina sy ny daty fandroana; Toro-tavoahangy fanodinana tavoahangy, azafady mba ho azo antoka tsara kokoa ny mari-pamantarana; Ny tahan'ny tavoahangy simba dia latsaky ny 1 / 200000; 3. Advantages Device: Import ...
Horonana mivangongo manodidina ny fametahana ny raki-peo Mmachine
Ny fametrahana horonan-tsarimihetsika manodidina ny fametahana ny fametahana lamba dia 1.Apply amin'ny sakafo, pharmaceutique, chimique isan'andro, birao, orinasa plastika sns .... 2.Mainly dia nampiasaina mba hikirakira ny mari-pamantarana hapetaka amin'ny cylinder na tsangam-bokatra kely izay tsy azo ampidirina amin'ny sehatra, tavoahangin-tsangantsara, fitifirana rano, tavoahangy mifangaro. sns. Ny mari-pamantarana mazava tsara, ny fahaizan'ny asa azo antoka, madio, tsy misy karandoha, tsy misy bubble. (L) 3 (X) 10-110mm Mandrindra ny diam-penin'ny 100mm (W) ) 76-10mm16-16mm 26-26mm (H) kely 36mm Rolling diamondide diameter 100mm Labeling ...
Vidiny ambany, High Quality ampoule labeling machine
Fampiasana tavoahangy milomano, tavoahangy ampoule, tavoahangy fanjaitra, batters, sausages sausages, fantsom-batana, penina sy ny sisa. Horonantsary horizonta mitentina machine dia ampiasaina betsaka ho an'ny indostria toy ny sakafo, ny fanafody, ny chimique tsara, ny fitaovana ara-kolontsaina ary ny electronics sy ny sisa. Azo ampiharina amin'ny fametahana ireo zavatra ireo amin'ny diam-pandrika madinika ary tsy mahavita mitsangana mora foana, toy ny Technical Parameters Drive Fitaovan'ny Fitaovam-pitaterana 100-220pcs / min Lany ny habeny: 10-90mm Length: 15-100mm Precision ± 1mm Label Roll Max: 300mm Label Core Stander: 75mm Machine Size 1800 * 600 * 1400mm Gewicht 220Kg Power AC 110 / 220v 50 / 60Hz 500W Coding Device DT-280 Configure Brand ...
Fitaovana fiaramanidina fiara manaparitaka milina fanaovana tavoahangy
Fitaovan'ny fiara misy teboka matevina amin'ny tavoahangy tavoahangy: Autopilotinerie ny fiaramanidina fiara mipetaka amin'ny tavoahangy matevina amin'ny fiara mitsitsy amin'ny Mitsubishi PLC, ny OMron sy ny LEUZE mpamantatra na Keyence, ny Mitsubishi Servo motera na ny servo delta. Fomba tsotra sy fiasan-tsaina, miasa mafy ary haingam-pandeha tsara sy marina. Fampitandremana automatique amin'ny tsy fahombiazana, tsy misy tavoahangy tsy misy fametahana.It dia mety amin'ny zavatra tsotra, toy ny sakafo, pharmaceuticals, cosmetics, stationery, CD, cartons ETC. Product Description Product Name Automatic taratasy ho an'ny fiaramanidina fametahaka marika milina fisaka tavoahangy Model NP-PL Machine Size 1600mm * 500mm * 1600mm Output Speed ​​60-200pcs / min (miankina amin'ny tavoahangy sy ny marika ny habeny) Label ...
50-500ml tantely famonosana tantely, tavoahangy tavoahangy volom-borona, fonosana alikaola
Auto Tendrombohitra mameno tavoahangy mofomamy
Fitaovam-pitaterana milina fanontam-pirinty tanteraka
Feno haingam-pandeha feno famoahana solika
Fanasan-tsakafo manasa mahandro